Jadwalka Kala-Bixinta ee Ugu Fiican ee Sifeeya Furitaanka Warshad iyo Warshad | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Jadwalka Isboortiga Spandex: Si Aad Khafiif U Ahaatid
Ku labisan daboolka miiska tusitaanka ganacsiga, miiskaaga asalka ah iyo kan guud wuxuu umuuqan doonaa gebi ahaanba ka duwan oo caato ah isla markaaba. Dharkaan cajiibka ah wuxuu xooga saarayaa qaabka miiska, gooladaha quruxda badan waxay ku darayaan dareen xarrago kooxda oo dhan. Ma aha oo kaliya miis mar dambe laakiin waa qalab aad u fiican oo loogu talagalay dhiirrigelinta, kaas oo bixiya bandhig xirfadeed iyo nadiif ah oo muuqaal ah. Macaamiishaada suurtogalka ah waxaa hubaal ah inay soo jiidan doonaan qaabkan muujinta gaarka ah.
Waxaa loo xushay caag laastik ah ikhtiyaarrada
Muuqaalka fidsan ee dharka ayaa ah sirta ku habboon dhudhunka. Waxaan kuu soo bandhigeynaa noocyada dharka, 180g caaga laastikada, polyester laastikada oo ololka celiya iyo 240g polyester retardant olol, xulashadaada.
Olol-celin 180g Elasty Polyester
Olol-celin 240g Elasty Polyester
Dheh “Haa” Miisaaniyadda Saaxiibtinimo & Tayo Sare
Laga soo bilaabo alaabta ceeriin, sida dharka, khaanadaha iyo hababka daabacaadda, illaa badeecadaha dhammaaday, mid kasta oo ka mid ah geeddi-socodkeenna waxaa loo qabtaa iyadoo la waafajinayo shuruudaha ku habboon deegaanka. Marka waad ku kalsoonaan kartaa nabadgelyada adeegsiga daboolka miiska fidinta ee muuqaalka dhacdada. Sidoo kale, wax lacag ah oo dheeraad ah kama qaadno daabacaadda midabka oo buuxa iyo meelaynta astaan ​​buuxda. Sidaa darteed, markaad soo bandhigto shaashad daabacan oo miis ah oo daabacan oo leh gadaal furan, waxaad si buuxda ugu soo bandhigi kartaa fariintaada miisaaniyad xaddidan.
Lagu hagaajin karo maahan kaliya sawirada laakiin sidoo kale qiyaaso
Daabacaadda daabacaadda sawirrada gaarka ah ee loogu talagalay adiga, waxaan sidoo kale sameyn karnaa daabacaadda u dhiganta ee miiska bandhigga ee cabbiro gaar ah. Hoos waxaa ku yaal tilmaamaha cabbirka miisaska soo-bandhigga caadiga ah iyo marada miiska. Haddii aadan ka heli karin midka ugu habboon cabbirka foomkan, kaliya noo dhaaf sawir iyo khabiir khibrad leh oo wax soo saar kaa caawinaya dibedda.
(180g dabacsan Poly)
G 240g laastik Poly Poly
S: Immisa midab ayaad u isticmaali kartaa daabacaadda astaanta?
J: Waxaan u adeegsanaa CMYK daabacaadda, markaa waxaad u adeegsan kartaa midabbo badan inta aad jeceshahay.
S: Ma ii samayn kartaa dabool miis jaango'an ah ama miis dabool leh oo laygu rakibay?
J: Haa, cabbirka miisaanka caadiga ah ee cabbirka miisaanka waa 6 ′ iyo 8 ′ dukaankeenna, laakiin cabbirka daboolka miiska ama daboolka miiska lagu rakibay ayaa sidoo kale loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo cabbirka miiskaaga ama cabbirka shaxankaaga. Haddii aad u baahan tahay cabbirro la qaabeeyey, fadlan la xiriir wakiilladayada adeegga macaamiisha.
S: Ma dharka ayaa dib u dhigaya?
J: Haa, waxaan leenahay caadooyin olol caato ah oo xul ah.
S: Miyaan ku dhaqi karaa ama ku dhejin karaa daboolka miiska?
J: Haa, waad ku nadiifin kartaa oo aad ku simi kartaa maradaada miiska iyadoo lagu dhaqo gacmo lagu maydho oo lagaa shaalo.
S: Dharku ma libdhi doonaan? Mudo intee le'eg ayuu soconayaa?
J: Si looga hortago hoos u dhaca oo loo ilaaliyo xasilloonida midabka, waxaan isticmaalnaa daabacaadda sublimation si loo hubiyo midabka dhakhsaha leh.
S: Sidee looga fogaadaa ceebta marka aad faafineyso miiska fiditaanka?
J: Sababta koowaad ee ceebaynta waa dharka khafiifka ah. Waxaan u isticmaali doonnaa dhar cufan oo gaaraya 180g iyo 240g si aan dhibaatada uga fogaanno.
Daboolida Miiska Caadiga ah
Kala Bixi Miiska Oo Lagu Daboolayo Logo